Nin hubaysan oo weerar ku qaaday guri ku yaalla Magaaladda…
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar nin hubaysan uu ku qaaday guri ku yaalla degmada Warta-nabadda ee Gobolka Banaadir halkaasi uu ku dilay ugu yaraan 3 ruux.
Nin ku hubeysan qori AK47 ayaa rasaas xoogan ku furay dadweyne badan oo ku sugnaa Guri Mingiska lagu tumo oo ku yaalla agagaarka Masjidka Xaaji Yuusuf ee Degmada Warta-nabadda waxaana halkaasi ku dhintay 3 ruux halka dhaawacu ku dhowyahay 20 ruux.
Dadka halkaasi ku geeriyooday waxaa ka mid ah nin lagu magacaabi jiray Saleemaan Maxamed Mahdi oo ka mid ah dadka halkaasi ku sugnaa, halka in kaban 15 qof ay ku dhaawacmeen.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in ninkii hubeysnaa uu goobta ka baxsaday, isla markaana waxaa goobta gaaray Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya oo xiray aaga uu falka ka dhacay.
Lama sheegin sababta keentay in ninkaan uu weerarka ku qaado gurigaan la sheegay in laga tumo mingiska, hayeeshee warar ay Axadle heshay ayaa sheegaya in ninkaan uu ka carooday daryan mingiska halkaasi lagu tumayay.